ဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေခြင်း | Shanghai Sunshine Technologies Co. , Ltd.
Non Dispersive InfraRed (NDIR) ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာသည်ဓာတ်ငွေ့အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စုပ်ယူမှုပြင်းထန်မှု (Lambert-Beer Law) အကြားဆက်နွယ်မှုကို အသုံးပြု၍ အနီးအနားရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တန်းများအတွက်ရွေးချယ်စုပ်ယူမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ငွေ့မော်လီကျူး၏သွင်ပြင်လက္ခဏာကို အခြေခံ၍ ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာဖြစ်သည်။ နှင့်ပြင်းအား။ အခြားသောဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများဖြစ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဓာတုပစ္စည်း၊ ဓာတ်ကူပစ္စည်းလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် Semiconductor အမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မပြန့်ပွားနိုင်သောအနီအောက်ရောင်ခြည် (NDIR) ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာများသည်ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှု၊ သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း၊ မြင့်မားသောထိခိုက်လွယ်မှု၊ ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နိမ့်ခြင်း၊ ၎င်းကိုဓာတ်ငွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ယိုစိမ့်မှုနှိုးစက်၊ စက်မှုဘေးကင်းရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ကျန်းမာရေး၊
NDIR ဓာတ်ငွေ့အာရုံခံကိရိယာ၏ကောင်းကျိုးများ -
၁ ။ CAT sensor သည်ဓာတ်ငွေ့အချို့ကိုတိုင်းတာသည့်အခါလောင်ကျွမ်းခြင်းမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ကာဗွန်ကိုလွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တိုင်းတာနိုင်စွမ်းအားလျော့နည်းစေသည်။ IR အလင်းအရင်းအမြစ်နှင့်အာရုံခံကိရိယာကိုဖန်သို့မဟုတ်စစ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်အကာအကွယ်ပေးထားပြီး၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်အဆက်အသွယ်မပြုသောကြောင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိပါ။
2. အောက်ဆီဂျင်မလိုအပ်ပါ။ NDIR သည် optical sensor ဖြစ်ပြီးအောက်စီဂျင်မလိုအပ်ပါ။
၃။ တိုင်းတာသည့်အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ၁၀၀% v / v အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NDIR အာရုံခံကိရိယာ၏အချက်ပြဝိသေသလက္ခဏာများမှာ - တိုင်းတာရန်ဓာတ်ငွေ့မရှိသည့်အခါအချက်ပြမှုပြင်းအားသည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မြင့်သောပြင်းအားကိုတိုင်းခြင်းသည်အနိမ့်ကျသောပမာဏကိုတိုင်းတာခြင်းထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
၄။ ကောင်းမွန်သောရေရှည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်နိမ့်သည်။ NDIR အာရုံခံကိရိယာ၏တည်ငြိမ်မှုသည်အလင်းအရင်းအမြစ်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုစံကိုက်ညှိခြင်းမရှိဘဲ ၂ နှစ်အသုံးပြုနိုင်သည်
5. ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်အကွာအဝေး။ NDIR ကို - 40 85 မှ 85 ℃အတွင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်